Xulka Iiraan Oo 14 Gool Ku Badiyay Xilli 40 Sannadood Ka Dib Dumarka Loo Ogolaaday Inay Galaan Garoonka | Laacib.net
October 10, 2019 Balaleti Comments Off on Xulka Iiraan Oo 14 Gool Ku Badiyay Xilli 40 Sannadood Ka Dib Dumarka Loo Ogolaaday Inay Galaan Garoonka
Markii ugu horeysay tan iyo 1981 dumarka Iiraan ayaa loo ogolaaday inay galaan garoon kubada cagta ah oo ay daawadaan xulka qaranka ragga ee dalkooda.
Iiraan ayaa waxa ay garoonka Azadi Stadium ee magalaada Tehran waxa ay ku soo dhaweeyeen xulka Cambodia kulan ka tirsan isreebreebka Koobka Adduunka ee 2022 lagu qabanayo dalka Qatar.
Kulankaan ayaa waxa uu taariikh u ahaa dumarka Iiraan kuwaasoo markii ugu horeysay muddo tobanaan sannadood ah loo ogolaaday in garoonka ku daawadaan kubada cagta ragga, waxaana loo ogolaaday seddex kun tikidh oo ay wada iibsadeen.
Kulankaan ayaa sidoo kale ahaa mid natiijo taariikhi ah laga diiwaangeliyay iyadoo xulka Iiraan ay 14-0 ku xasuuqeen xulka Cambodia.
Waa guushii ugu weyneyd ee ay Iiraan gaarto tan iyo sannadkii 2000 markaasoo ay 19-0 uga badiyeen xulka Guam.
Inkastoo xulka Cambodia 14-0 lagu xasuuqay hadana macalinkooda Keisuke Honda oo ahaa xiddigii hore ee Japan iyo AC Milan ayaa waxa uu sawirro la galay qaar ka mid ah dumarka ciyaarta u soo daawasho tagay markii ugu horeysay noloshooda.
FIFA ayaa ku qasabtay Iiraan inay dumarka u ogolaadaan inay daawadaan ciyaarta ragga, iyadoo mar sii horeysay gabar si dhuumasho ah ku gashay garoonka oo xukun sugeysay ay isgubtay una dhimatay gubniinka.
Haatan xiriirka kubada cagat Iiraan ayaa ogolaaday inay Dumar qeyb u gooni ah ka soo fariistaan garoonka iyadoo kulankii maanta la siiyay 3 kun tikidh oo ay wada iibsadeen.